यो पूर्ण दृष्टि टेक्नोलोजीको साथ LG G6 स्क्रीन हो Androidsis
LG G6, यो तपाइँको स्क्रिन हो
LG यो मोबाइल विश्व कांग्रेस २०१ of को रूपरेखा भित्र G6 को प्रस्तुतीको बेलामा आश्चर्यचकित भयो जुन २ K रिजोलुसन र any.2017 इन्चको स्क्रीन सहित टर्मिनल प्रस्तुत गरेर र सायद कुनै पनि पक्ष फ्रेमहरू। प्रस्तुतीकरणको बखत, निर्माताले यसको बारेमा कुरा गर्न छाडेन पूर्ण दृष्टिकोण टेक्नोलोजी, LG G6 को महान सम्पत्ति मध्ये एक।
तर, फुल भिजन टेक्नोलोजी भनेको के हो? के यसले छविको गुणस्तरलाई यति धेरै असर गर्दछ? हामीले LG G6 र iPhone Plus Plus को बीचमा गरेको तुलना हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि हो, त्यसैले म यो टेक्नोलोजी के समावेश गर्दछ भनि वर्णन गर्न गइरहेको छु।
यो LG G6 मा कसरी पूर्ण दृष्टिकोण टेक्नोलोजीले कार्य गर्दछ
यस टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गर्नु अघि, म एक धेरै रोचक विवरण हाइलाइट गर्न चाहन्छु र त्यो त्यो हो LG G6 पहिलो स्मार्टफोन हो जसले १ 18: panel प्यानल प्रस्तुत गर्दछ। यो ढाँचा अधिक परम्परागत मापन भन्दा अलि लामो छ, जसले ११..11,6% सम्म अधिक जानकारी प्रदर्शन गर्न प्रबन्ध गर्दछ।
यस LG G6 को अर्को विशेषताहरू यो हो टर्मिनल स्क्रिनको कुनामा एउटा विशेष असेंबली हुन्छ जसले उपकरणलाई सम्भावित बम्प वा फल्सलाई ठूलो प्रतिरोध दिन्छ। उही स्ट्यान्डमा, हामीले कुनै एलजी G6 अनुहार तल पटक पटक छोड्दा परीक्षण गरिएको थियो जसमा कुनै चोटपटक चोटपटक लागेन। सावधान हुनुहोस्, भुई कारपेट गरिएको थियो, तर यस्तो देखिन्छ कि फोन एकदम प्रतिरोधी छ।
अर्कोतर्फ, यसको क्वाड एचडी + प्यानलको २,2.880० x १1.440० पिक्सेलको रिजोलुसन छ र अधिक केहि छैन र 564 डीपीआई भन्दा कम केही छैन। र यो त्यहि हो जहाँ HDR प्रविधि आउँछ किनभने LG ले दुबैसँग यसको LG G6 सुसज्जित पार्ने छन।
म एचडीआर १० प्रविधिको बारेमा कुरा गर्दैछु, फोनमा उपलब्ध मल्यान्ड गरिएको सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट or वा आईफोन Plus प्लस जस्ता। एलजी जी of को मामलामा एचडीआर १० टेक्नोलोजी बाहेक कोरियाली निर्माताले फोनलाई डोल्बी भिजन टेक्नोलोजी प्रदान गर्न डोल्बीसँग मिलेर काम गरेका छन।
को मामला मा HDR १०, भन्न को लागी यो उपभोक्ता टेक्नोलोजी संघ द्वारा विकसित एक खुला ढाँचा हो, अन्य चीजहरु बीच CES संगठित को आरोप मा, जबकि Dolby दर्शन डोल्बीको हो र यो कि यसको निर्माणकर्ताले यसको संभावनाहरूको फाइदा लिन प्रति स्क्रीन dollars डलर खर्च गरेको छ। र तपाइँ कसरी आशा गर्न सक्नुहुन्छ, डल्बी भिजन भनेको प्रविधि हो जुन LG G3 स्क्रिनले यी वास्तविक र offerहरू प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ।
दुबै प्रविधि बीचको मुख्य भिन्नता, धेरै साधारण तरीकाले वर्णन गरिएको छ कि HDR १० ले र colorsहरूको निश्चित प्रतिनिधित्व गर्दछ, जबकि HDR डोल्बी भिजन प्रणाली फ्रेममा निर्भर टोनहरू भिन्न गर्न सक्षम छ।
यस तरिकाले, यदि निर्देशकले एक धेरै अन्धकार दृश्य रेकर्ड गर्न चाहन्छ र त्यसपछि अर्को शट प्रयोग गर्दछ जहाँ एक धेरै उपकरण र जीवन हुन्छ। HDR 10 टेक्नोलोजीको साथ र the्गहरूको स्पष्टता र स्पष्टता डोल्बी एचडीआर प्रणालीमा त्यति फरक हुँदैन दर्शन.
LG G6 को साथ प्राप्त परिणाम केवल दर्शनीय छ। र colors्गको दायरा प्रभावशाली छ र तथ्य यो छ कि पुन: उत्पादन गरिएको दृश्यको आधारमा टोनहरू संतृप्तिमा भिन्न हुन्छन् यस फोनको सम्भावनाहरूको अधिकतम बनाउन मल्टिमेडिया सामग्रीको मजा लिन आमन्त्रित गर्दछ।
एलजी पूर्ण दृष्टि टेक्नोलोजीमा शर्त लगाएर पूर्ण रूपमा सही छ, दुबै एचडीआर १० र डल्बी भिजन प्रयोग गरेर बजारमा एक उत्तम स्क्रिनहरू सिर्जना गर्न। अब हामीले भर्खर मात्र पर्खनु पर्छ तिनीहरूले हामीलाई परीक्षण इकाई नदिउँन् ताकि हामी बुझ्न सक्दछौं कि यस फोनले गहन प्रयोग पछि कसरी व्यवहार गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » LG » LG G6, यो तपाइँको स्क्रिन हो
स्यामसंग ग्यालेक्सी S8 र S8 + मा स्क्रीनशटहरू कसरी लिने